अबकाे इपान यस्ताे हाेस् ! - UrjaKhabar अबकाे इपान यस्ताे हाेस् ! - UrjaKhabar
अबकाे इपान यस्ताे हाेस् !
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को असार १५ गते (सोमबार) नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न निर्वाचन हुँदैछ । छैटौं कार्यसमितिका लागि करिब दुई दशकपछि हुन लागेको यो पहिलो निर्वाचन हो ।
अहिलेसम्म इपान पदाधिकारी सर्वसम्मतले चयन हुँदै आएको थियो । सीमित घेराभित्र अटाएको निजी क्षेत्र, केही व्यक्तिको सक्रियता तथा रुचिभित्रै रुमल्लिएर चलिरहेको विगत बिर्सन मिल्दैन । तर, अब यो संस्था काम, क्षेत्र, जिम्मेवारी र योगदानका हिसाबले फराकिलो हुँदै गएको छ ।
सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ मार्फत विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गरायो । ऐन आएको केही वर्षपछि विदेशी निजी क्षेत्रलाई खिम्ती (६० मेगावाट) र भोटेकोसी (सुरुमा ३६ मेगावाट पछि ४५ मेगावाट) निर्माण गर्न अनुमति दिइयो । त्यसपछि, निजी क्षेत्रले छाता संगठनको महसुस गरेको हुनुपर्छ ।
विदेशीले दुई आयोजना निर्माण गरिरहँदा यता स्वदेशीकै पहलमा ३ मेगावाटको पिलुवा र साढे २ मेगावाटको इन्द्रावती अगाडि बढाइयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले कम्पनी खोलेर २२ मेगावाटको चिलिमे सुरु गर्यो । अब निजी क्षेत्र संगठित हुनुपर्छ भन्ने चेत र यसको विस्तारका लागि पनि संस्थाको खाँचो औंल्याइएको हुनुपर्छ ।
अमेरिकी कम्पनी पाण्डा र हार्जाले भोटेकोसी निर्माण गरिरहेका थिए । त्यसमा नेपाली पार्टनर थिए, स्व. प्रभाकरशम्शेर राणा । यिनै राणाको पहलमा २०५८ (सन् २००१) सालतिर इपानको जग हालिएको थियो । केही वर्षसम्म राणाले नै संस्थाको नेतृत्व सम्हाले ।
पछिल्ला वर्षमा सन्दिप शाह, सुवर्णदास श्रेष्ठ, खड्गबहादुर विष्ट हुँदै शैलेन्द्र गुरागाईंसम्मले पाँचौं कार्यकाल कटाए । इपानले १८औं वार्षिक साधारणसभा पनि सक्यो । संस्था १९औं वर्षमा हिँडिरहेको छ । आज यसको दायर, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी समेत विस्तारित हुँदै गएको छ ।
हिजोको साँघुरो घेराभित्र केही व्यक्तिले हाँकेको संस्थामा आज धेरैको रुची बढेको छ । काम र राज्यप्रतिको योगदान बढिरहँदा वा सयौं निजी कम्पनी जलविद्युत् विकासमा होमिइरहँदा चासो बढ्नु स्वभाविकै हो । साँधुरो घेराबाट इपान अब विशाल क्षेत्रफलमा फैलिन खोजेको छ । यसो हुँदा यसप्रति सबैको आकर्षण हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।
भनिन्छ, इपान सुरु हुँदा केन्द्रीय प्रणालीमा पुगनपुग १५० मेगावाट विद्युत् थियो । आज झन्डै १३ सय मेगावाट पुगेको छ । निजी क्षेत्रले मात्र साढे ६ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा आकार फैलिनु वा सदस्यहरूको संख्या बढ्दै जानु स्वभाविकै हो ।
इपान विस्तारित हुँदै आयो । यसका समस्या पनि बढ्दै आए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकासको ढोकाभित्र त छिरायो तर गजबार लगाएर थुन्यो । गर्नुपर्ने सहजीकरण गरेन । सरकारले १०९ वर्षमा उत्पादन गरेको विद्युत् निजी क्षेत्रले करिब २७ वर्षमै प्रणालीमा थप्यो ।
आज देश लोडसेडिङमुक्त छ । यसमा आधा हिस्सा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्को छ भन्दा अत्योक्ति हुँदैन । देशलाई अँधयारोमुक्त बनाउँदै समृद्धिको यात्रामा हिँडाउन सरकारसँग हातेमालो गर्ने उद्योग वा निकायले आज अपहेलित महसुस गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको आयतन बढिरहँदा यसभित्र अनेक स्वार्थ, लोभ, कुरिति, बेइमानी जस्ता उपक्रम फस्टाउन थालेका छन् । यही कारण आर्थिक विकासमा महत्त्वपूण भूमिका खेलिरहेको निजी क्षेत्र सिमान्त रेखामा फ्याँकिएको देखिन्छ । अनुमति दिएर ढोकाभित्र प्रवेश गराएपछि त्यसको रेखदेख, नियमन, निरिक्षण वा कामको गुण–दोष सरकारले लेखाजोखा गर्नुपर्छ । बदमासी गरे कारबाही र राम्रालाई प्रोत्साहन गर्न चुक्नु हुँदैन । तर, सरकारले कहिल्यै यस्तो नीति अंगिकार गरेन ।
थालनीदेखि नै स्वदेशी निजी क्षेत्र तिरस्कृत बन्यो । सुरुमै विदेशीलाई अनुमति दिइयो । स्वदेशीको लगानी, क्षमता र दक्षतालाई नजरन्दाज गरियो । सरकारी दिमागमै स्वदेशी भन्दा विदेशी ठीक भन्ने मानसिकताले जरा गाड्यो । विदेशीलाई रातो कार्पेट, स्वदेशीलाई छिँडीको बास भयो । यसरी स्वदेशी विकासकर्ता हेपिँदै, चेपिँदै र ठगिँदै आएको पक्ष नकार्न सकिँदैन ।
साना–साना प्रवद्र्धकलाई घुचेटेर हिँडाउने स्व. हरिबैरागी दाहालको योगदान यो क्षेत्रमा अतुलनीय मानिन्छ । उनकै पहलमा पिलुवा खोलाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएपछि स्वदेशी निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा सजिलोसँग पाइला चाल्न थालेको देखिन्छ । जसमा पूर्वजलस्रोत मन्त्री स्व. शैलजा आचार्यको पनि ठूलो योगदान रहेको प्रवर्द्धकहरू सम्झिरहन्छन् ।
निजी क्षेत्र सरकारको व्यवहारप्रति सजग रहँदै एक ढिक्का हुनुपर्थ्याे । कानुनले तोकेका सेवा–सुविधा र त्यही अनुसार व्यवहार पाउन एकै घेराभित्र गोलबद्ध हुनुको विकल्प थिएन । तर, निजी क्षेत्रले पनि त्यो हैसियत बनाउन सकेन । आफूले टेकेको खुट्टो दरोसँग उभ्याउन सकेन । यही कारण ऊ घुमाउरो तरिकाले सरकारबाट बहिस्कृत हुँदै गयो ।
सुरुमा एक–दुई आयोजना निर्माण भए । प्रवर्द्धक पनि सीमित थिए । जब आयोजना निर्माणको संख्या थपिँदै गयो तब प्रवर्द्धकहरू बढ्दै गए । इपानका सीमित पदाधिकारीको संख्या समेत बढ्दै गयो । हिजो निजी क्षेत्रका थोरै चाहना र माग थिए । आज सिंगो क्षेत्रको रक्षा, उत्थान र विकास गर्न सरकारसँग पैरवी गर्नुपर्ने सयौं विषय थपिए ।
विद्युत् उत्पादन सरकारको हाराहारी पुर्याए पनि आज निजी क्षेत्र निकै जटिल अवस्थाबाट गुज्रेको छ । सरकारबाट थप हेपिएको महसुस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सिंगो क्षेत्र एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, प्रवर्द्धकहरू आफू–आफूबीच नै विवादित हुन थालेका छन् । जब समस्या थपिँदै गए, टाढिँदो दूरी नजिक बनाउनुपर्ने खाँचो देखियो तब आफैं–आफैं लड्न थालेका छन् ।
निजी क्षेत्रको यही प्रवृत्तिले उसले आगामी दिनमा अझ जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग जुघ्न प्रवर्द्धकहरू एकै ठाउँ उभिनुपर्ने हो । इपानभित्र संगठित हुँदै आवाज बुलन्द बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यसको संकेत झन् मधुरो हुँदै गएको छ । बाटो बिराएर कुबाटोतिर भौंतारिएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
इपान कार्यसमिति आजसम्म सर्वसम्मत हुँदै आयो । यसपटक पनि सर्वसम्मतको प्रयास नभएको होइन । तर, संस्थापन भनिएका केहीबाट नयाँ अनुहारले आफूलाई अपहेलित महसुस गरेको देखियो । पुरानाले नयाँलाई जोडेर लैजान चाहेन वा सकेन । पाका र दशकौंको अनुभव भएकाले पनि सहमतिमा खासै भूमिका खेल्न सकेनन् । यसो हुँदा सर्वसम्मत पदाधिकारी चयनको बाटो बन्द भयो ।
एक पटक स्थापित पद्धतिलाई सधैं निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नु जडता हो । यद्यपि, धेरै प्रवर्द्धक कम्पनीहरू बाहिर रहेको र जम्माजम्मी १ सय ७४ सदस्यीय इपानमा निर्वाचनकै ध्वाँस नदेखाएको भए प्रिय हुने थियो ।
यी गतिविधिले इपान वा निजी क्षेत्रबीच फाटो ल्याउन उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको देखिन्छ । हिजो सहमितबाट पदाधिकारी चयन भएको थियो आज पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन । एक पटक स्थापित पद्धतिलाई सधैं निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नु जडता हो । यद्यपि, धेरै प्रवर्द्धक कम्पनीहरू बाहिर रहेको र जम्माजम्मी १ सय ७४ सदस्यीय इपानमा निर्वाचनकै ध्वाँस नदेखाएको भए प्रिय हुने थियो ।
सरकारसँग पैरवी गर्नुपर्ने आफ्ना दर्जनौं मुद्दा एकातिर पन्छाएर संस्थालाई निर्वाचनतिर धकेल्नुमा केही पुराना अनुहार र यथास्थिति मन पराउनेहरू जिम्मेवार देखिए । यसो भन्दैमा पुरानाहरू नेतृत्व पाउनकै लागि शतप्रतिशत बेहोसी भए । आफ्ना समस्या, मुद्दा र निकासका अवयव बिर्सिए भन्न नमिल्ला ।
तर, जुन काम उनीहरूले गर्दा हुन्थ्यो । नयाँ र पुरानाबीच मतभेदको दूरी नजिकिन्थ्यो । र, निजी क्षेत्रले उठाउने मुद्दामा थप बल पुग्थ्यो । त्यसमा कमजोरी भएकै हो । सहमतिमा जान नसक्नुमा नयाँ अनुहारको पनि कमजोरी छ । तर, संसारलाई मैले भन्दा बढी कसैले बुझेको छैन भन्ने भ्रममा उद्देलित हुनु र पदलाई राजसिंहासन परिकल्पना गर्दै घुरेर हेरिरहनुमा पुराना बढी जिम्मेवार देखिए ।
पुरानाले अलि बढी प्रयास गरेर परामर्श गरेको भए नयाँ अनुहारले मान्ने अवस्था देखिन्थ्यो । यो कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा दुई फ्याक भएर निर्वाचनमा होमिनुपर्ने थिएन । १ सय ७४ जना सदस्यलाई यता र उता तानेर हुर्मत लिनुपर्ने थिएन । तँ ठूलो कि म ठूलोको परिस्थिति टर्थ्याे । यसले स्वयं निजी क्षेत्रलाई दरिलो बनाउँथ्यो । सरकारसँग गर्नुपर्ने लडाइँको मोर्चामा सशक्तरूपमा उभ्याउँथ्यो ।
यी विषय भोलिका लागि पनि पाठ हुन सक्छन् । अब निर्वाचन हुने भइसक्यो । त्यसमा पारदर्शी र प्रजातान्त्रिक विधि अपनाइयोस् । जसले निर्वाचनपछिका दिनमा समेत सिंगो निजी क्षेत्र वा नयाँ र पुरानाबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाइराखोस् । राजनीतिक आस्था, भावना र स्वार्थबाट एक कदम माथि उठ्ने साहस जुटाउनु जरुरी छ ।
इपानले गर्नुपर्ने धेरै छ । अहिलेसम्म बाहिर रहेकालाई भित्र तान्नुपर्नेछ । साना वा रुग्ण आयोजनाका समस्या समाधानमा पैरवी गर्नुपर्नेछ । सरकारबाट घोषित् ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान, नयाँ विद्युत् खरिद दर लगायत सुविधा पाउन निरन्तर दबाब दिनुपर्नेछ ।
कोभिड असरका समस्याको निराकरण, अनुमतिपत्र, सञ्चालित आयोजना तथा वन–वातावरणीय समस्या, निर्माणक्रमका हैरानी जस्ता सयौं मुद्दामा सरकारसँग लड्नुपर्नेछ । यदि, इपान वा निजी क्षेत्र छिननभिन्न हुँदै गयो भने सबै प्रवर्द्धकले जलविद्युत्को ढोकामा भोटेताल्चा झुण्ड्याएर अर्कै व्यवसाय गरे हुन्छ ।
आज इपानभित्र वा निजी क्षेत्रबीच सरकारइतर र प्रतिपक्षीका गतिविधि देखिन्छन् । एउटा राजनीतिक दलले सत्ता चलाइरहँदा त्यससँग आस्था राख्नेले सरकारप्रति नरम नीति अंगाल्ने र अर्को खेमा विरोधीको रूपमा उभिने गरेको छ । सरकारी खेमाले घोषित सेवा–सुविधा सुटुक्क जस्केलाबाट लिने र मुख बन्द गरेर बस्ने गरेको यदाकदा देखिएको छ ।
उता प्रतिपक्षी भनिएको खेमा धुन्धान अग्रगामी हुन्छ । विरोध गर्दै सरकारमाथि खनिएको देखिन्छ । जस्केलो र उग्र धुन्धुकारी दुवै प्रवृत्ति निजी क्षेत्रका लागि घातक हुन् । यसैले, अबका दिनमा बीचको बाटो अपनाएर सरकारसँग सहकार्य गर्दै अधिकतम लाभ लिन प्रवर्द्धकहरू चुक्नु भएन ।
बैंकिङ उद्योग २–३ खर्बभन्दा बढीको छैन । पर्यटन, सेवा, पूर्वाधार निर्माण लगायत उद्योगको पुँजी त्यही ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नहोला । सबै औद्योगिक क्षेत्र एकातिर र विद्युत उद्योग अर्कोतिर राखेर तुलना गर्दा विद्युत्कै पल्ला भारी हुन्छ ।
इपानको नयाँ संशोधित विधानअनुसार १७ जनाको कार्यसमिति बनाइएको छ । सल्लाहाकार समितिदेखि प्रदेश प्रतिनिधि समेतको व्यवस्था छ । अब यी व्यवस्थामा अनुभवी र क्षेत्रको हितमा मरिमेट्नेहरू जाउन् । व्यक्ति–व्यक्तिबीचका समस्या भित्रै समाधान गरेर निजी क्षेत्रको हितमा कााम गरुन् । गर्न नसक्ने, क्षमता नभएका र विगतमा पनि परिणाम दिन नसक्नेहरू बाहिर बसुन् ।
कमजोर निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेप्ने, घोषित सेवा–सुविधा नदिने र उसले उत्पादन गरेको विद्युत् किन्न अनेक बाहना बनाउने आधार स्थापित हुनु हुँदैन । आजै हाराहारी विद्युत् उत्पादन पुर्याएको निजी क्षेत्रले केही वर्षभित्र सरकारलाई उछिन्नेछ । त्यो विद्युत् कसरी बजार पुर्याउने भन्ने अर्को चिन्ता छ । यदि, निजी क्षेत्र एकबद्ध नभए अर्बौंको लगानी शून्यमा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।
आज १५ हजार मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्रसँग छ । यी मध्ये ३ हजार मेगावाट निर्माणाधीन छन् । प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ आधार मान्दा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, पिपिए लगायत चरणका आयोजनामा अर्को एक खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ ।
एकछिन, सिंगो औद्योगिक क्षेत्रको पुँजीको सामान्य विश्लेषण गरौं । बैंकिङ उद्योग २–३ खर्बभन्दा बढीको छैन । पर्यटन, सेवा, पूर्वाधार निर्माण लगायत उद्योगको पुँजी त्यही ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नहोला । सबै औद्योगिक क्षेत्र एकातिर र विद्युत उद्योग अर्कोतिर राखेर तुलना गर्दा विद्युत्कै पल्ला भारी हुन्छ ।
अझ, बैंक, पर्यटन, सिमेन्ट, डन्डी, स्वास्थ्य वा अन्य झिनामसिना उद्योग व्यक्तिका पुस्ता–पुस्तान्तरसम्म चलिरहन्छन् । हस्तान्तरण हुँदै जान्छन् । तर, विद्युत् उद्योग ३० वर्षपछि सरकारलाई सुप्पिनुपर्छ । सीमित अवधिसम्म निजी क्षेत्रले भाडामा चलाएको हुन्छ । घामझैं छर्लङ्ग यो पक्ष आँखा चिम्लेर हेपिइरहनुमा निजी क्षेत्रका पनि तमाम कमजोरी छन् ।
१–२ खर्ब रुपैयाँ पुँजीको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स तथा यस्तै छाता संस्थाले परेको बेला सरकार हल्लाउँछन् । कतिपय अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन नै हुन्छ । उता सडक पूर्वाधारमा संलग्न ठेकेदार तथा निर्माण व्यवसायीको दबाबमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधान हुँदै आएको छ ।
विडम्बना, खर्बौं–खर्बको विद्युत् उद्योग हेपिएर, चेपिएर रुनुपर्नाको कारण यहीँभित्रको छिद्रको परिणति हो । अबको इपान नेतृत्वले यस्ता छिद्र टालोस् । बहुसंख्यक असुन्तुष्टको चित्त बुझाओस् । समस्यालाई साझा ठानोस् । र, सरकारले घोषणा गरेका सुविधा लिँदा आँखामा आँखा जुधाएर वार्ता गर्न सकोस् । न कि आफू–आफूमा तारे र तिल्के गोरु जस्तै जुधेर होइन । विरासत धानिदिन राजनीतिको झन्डा ओढेर त्यहीँभित्रको जुठोपुरो खाएर होइन ।
यत्ति गर्न सके खर्बौंको लगानी अप्ठ्यारोमा पर्दैन । बैंकिङ क्षेत्र तर्सिनु पर्दैन । सर्वसाधारण वा सेयरधनीले पनि मुनाफा र लगानी फिर्ता पाउँछन् । सरकार सहयोगी बन्न कर लग्छ । देशको सिंगो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । जलविद्युत्को भविष्य उज्वल छ । नयाँ आउने इपान कार्यसमितिलाई अग्रिम शुभकामना !